Musharixiin Soomaali ah oo u tartamaya Doorashada Baarlamaanka dalka Sweden? [Warbixin] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Musharixiin Soomaali ah oo u tartamaya Doorashada Baarlamaanka dalka Sweden? [Warbixin]
Laba ka mid ah waxay ka wada tirsan yihiin xisbiga talada haya ee Social Democrats, waxayna ka ololaynayaan magaalada caasimadda ah ee Stockholm. Tiro ka badan 60,000 oo Soomaali ah ayaa la sheegay in ay ku nool yihiin dalka Sweden, sida ay sheegayso tirokoob la sameeyey 2016.
Maxamed Nuur iyo Barni Nuur waxay ka mid yihiin Soomaalida dalkaas muddada dheer degganaa, haatanna u taagan xildhibaannada baarlamaanka. Waa markii ugu horraysay ee Soomaali ay baarlamanka u tartanto.
Waxaa la weydiiyey oo su’aalo isku mid ah weydiisay, xilli ay aad ugu mashquulsanaayeen ololaha doorashada oo gabagabo ku dhow. Codadka ay ku xisaabtamayaan waxay ka doonayaan intooda badan Soomaalida ku nool Sweden ee xaqa u leh inay codeeyaan.
Wuxuu Sweden deggan yahay 20 sano, siyaasadda wuxuu soo galay muddo 5 sano ku dhow. Degmada uu ku soo koray ayuu xisbiga Social Democrats guddoomiye uga ahaa.
Muxuu doonayaa in lagu doorto?
Wuxuu sheegay in afarta sano ee ay xukunka hayaan ay shaqaaleysiiyeen 300,000 oo qof. Wuxuu intaa ku daray in guryo badan ay dhiseen, haddii ay doorashada ku guulaystaanna ay kuwo kale dhisi doonaan.
Baasaboorka oo lagu qaato wakhti ka yar kan Soomaalida ay hadda ku qaataan.
In aan qof Soomaali ah lagu bahdilin waddanka Sweden.
In qof kasta oo dhallinyaro ah uu guri helo oo cariiri uusan ku noolaan.
In la iigu codeeyo waxqabadkayga
Siyaasadda kuma jirin, laakin waxay ahayd shaqaale dawladeed muddadii 15ka sano ahayd ee u dambaysay. Waxay xubin ka ahayd guddiga xisbiga ee xaafadda oo ay si mutadawacnimo ah ugu shaqaynaysay.
Waxay sheegtay in ay dadkaas wax u qabanayso maadaama ay khibrad u leedahay arimaha socdaalka. Waxay intaa ku dartay in ay ka shaqaynayso sidii Baasaboorka Soomaalida uu aqoonsi uga heli lahaa Sweden.
Previous articleCiidamo ka tirsan AMISOM oo lagu Qarxiyey Suuqa Xoolaha & Qof rayid ah oo ay toogasho ku dileen
Next articleXildhibaanno ka tirsan Beelaha Digil & Mirifle oo Eedeyntii cusleyd u jeediyey Dowladda Farmaajo [Daawo]